खान जाने स्याउ फल मात्र होइन, अमृत हो - ज्ञानविज्ञान
स्याउ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदम गुणकारी छ । स्याउमा हाम्रो शरिरको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न पोषक तत्वह रहेका हुन्छन्। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै उपयोगी स्याउलाई केही मानिस बोक्रासहित खान रुचाउँछन् भने केही बोक्रा झिकेर खान रुचाउँछन् । स्याउ एक प्रकारको फलफुलको राजा नै भन्दा पनि हुन्छ खानमा पनि निकै स्वादिलो हुन्छ । खादा गुलियो भएको हुनाले यसलाई केटाकेटिले पनि मन पराउछन् ।
यस्ता छन्, स्याउ खानुका फाइदा
शरिरको तौल हरदम फिट राख्न चाहनुहुन्छ भने नियमित स्याउ सेवन गर्नुहोस् । स्याउ नियमित सेवन गर्दा तपाईको पाचन प्रणालीलाई सही राख्छ । यसका साथै शरिरको इम्युनो सिस्टमलाई पनि राम्रो राख्छ । धेरै नसर्ने रोगहरु जस्तै मुटुरोग उच्चरक्तचाप मधुमेह आदि शरीरको तौलसंग सम्वन्धीत हुन्छ । स्याउमा पाइने धेरै फाइबर र कम क्यालोरीले शरीरको तौल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
पत्थरी कव्जीयतबाट बचाउँछ
नियमित स्याउ खानाले पत्थरी हुन सक्दैन । स्याउमा भएको फाइबरले झाडा पखलाको बेला धेरै पानी सोसी झाडा पखला नियन्त्रण गर्छ । त्यसैगरी कब्जियत भएको बेला त्यहि फाइबरले कोलनबाट पानी तानी कब्जियत निकोपार्न मद्दत गर्छ ।
स्याउको सेवनले अनुहारमा हुने काला तथा सेता दागहरु हट्छन् । यसबाट अनुहारमा चमक आउँछ । साथै स्याउको प्रतिदिन सेवनले तपाईंको शरीरमा मौजुद रहेको अनावश्यक बोसो बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छ । नियमित सेवनले अनुहारमा भएका कालो धव्वाह पनि हराएर जान्छ र अनुहार सुन्दर देखिन्छ ।
ब्रस गर्दा पनि दाँत चम्किलो हुँदैन भने दैनिक स्याउ मजाले चपाएर खादा दाँतमा चमक आउने छ । स्याउ चपाँउदा र टोक्दा निस्कने रयालले दाँत सड्नबाट बचाउनुको साथै ब्याक्टेरियाको संख्या घटाउछ ।
एनिमियाको बिरामीलाई फाईदा
एनिमिया रोगको कारण शरिरमा रगतको मात्रा कमी भएर आउँछ र हेमोग्लोविनको मात्रा घट्छ । त्यसको लागि स्याउ खानु अति उत्तम हुन्छ । स्याउमा भएको आइरनले रगतको मात्रा बढाउन सहयोग गर्छ । यस्ता रोगीले दैनिक स्याउ सेवन गर्नु अति उत्तम हुन्छ ।
क्यान्सरको खतरा मुक्त
नियमित सेवन गर्दा पेट तथा स्तनको क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ । स्याउले मानिसको शरिरमा रोगसंग लड्ने कोशिकामा तागत प्रदान गर्छ ।
स्याउमा पाईने फाइबरले कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गराउँछ । यसका साथै नियमित स्याउ खाने हो भने डायविटिज हुने सम्भावना पनि २८ प्रतिशतले कमी भएर आउने छ । स्याउको सेवनले शरिरमा ग्लुकोजको मात्रा कमी हुन दिँदैन र इन्सुलिन लिनुपर्ने आवस्यकता पर्दैन ।
शरीरमा छिर्ने खानामा धेरै विषालु पदार्थहरु रहेका हुन्छन् । त्यसलाई शरीरको रक्तसञ्चार प्रक्रियासम्म पुग्नबाट रोक्ने काम कलेजोले गर्छ । जसले गर्दा कलेजोमा विषालु पदार्थ भरिएको हुन्छ । स्याउ एक त्यस्तो फल हो जसले कलेजोलाई शुद्ध र सफा गर्न मद्दत गर्छ ।
स्याउमा पाइने क्यूएरसेटिन नामक एन्टी अक्सिडेन्टले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ ।
एल्जाइमर हुन दिदैन
स्याउले मस्तिस्कलाई बुढो हुन दिदैन र हरदम स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्छ । डायबीटीज हुन दिदैन
हरेक दिन एक दाना स्याउ खाने मानिसमा टाइप २ डायबीटीज हुने सम्भावना २८ प्रतिशतले कम हुन्छ ।
स्याउमा पाइने घुलनसिल फाइबर आन्द्राको चिल्लो पदार्थसंग बाधिन्छ र शरीरमा कोलेस्टेटोलको मात्रा कम हुन्छ ।
स्याउमा पाइने फाइबरले धमनीका भित्ताहरुमा कोलेस्टेरोल जम्न नदिइ रक्तसञ्चारलाई स्वस्थ बनाई राख्छ । पित्तथैलीको पत्थरी स् पित्तथैलीमा भएको पित्तमा कोलेस्टेरोलको मात्रा बढी भएमा त्यो जम्न गई पत्थरी हुन्छ । स्याउ खाँदा त्यसमा भएको फाइबरले कोलेस्टेरोलको मात्रा घटाई पित्तथैलीको पत्थरी हुन दिदैन ।
मधुमेहलाई नियन्त्रित गर्छ
स्याउको सेवनले आँखामा हुने मोतियाविन्दुको समस्याबाट बचाउन मद्दत गर्छ । आँखासम्बन्धि अन्य रोग पनि लाग्न दिँदैन ।
दमका बिरामीलाई गुणकारी
यस्ता छन् ,स्याउको बोक्राको फाईदा
स्याउ मधुमेहका बिरामीका लागि स्याउ निकै फाइदाजनक मानिन्छ । त्यसमा पनि स्याउको ब्रोका मधुमेहका लागि अझ फाइदाजनक छ । यसले सुगरलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ ।
बोक्रासहितको स्याउको सेवनले दिमाग तेजिलो हुन्छ । साथै, मस्तिष्कको कोषिका ९ब्रेन सेल०लाई स्वस्थ राख्न पनि सघाउ पुर्‍याउँछ ।
बोक्रासहितको स्याउको सेवनले आँखामा हुने मोतियाविन्दुको समस्याबाट बचाउनका साथै आँखासम्बन्धि अन्य रोग पनि लाग्न दिँदैन ।
बोक्रासहितको फाइबरयुक्त स्याउको सेवनले पित्तथैलीमा जमेर बसेको कोलेस्टेरोललाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा पित्तथैलीमा पत्थरी हुन पाउँदैन ।
दाँतको पहेंलोपना हटाउन तथा दाँतलाई स्वस्थ राख्न स्याउ निकै उपयोगी मानिन्छ । स्याउमा टुथपेस्टको गुण हुने भएकाले यसलाई चपाएर खानाले दाँतमा अड्किएको जिद्दी दागबाट समेत छुटकारा पाउन सकिन्छ । यस्तै, बोक्रासहित स्याउको सेवनले दातमा क्याभिटी हुनबाट बचाउँछ । त्यसबाहेक गर्भावस्थामा रगतको कमि हुन पाउँदैन ।
फाइबर, क्याल्सियम, एन्टि–अक्सिडेन्ट तथा प्लेबिनाइड तथा फाइटोकेमिकल्सले युक्त स्याउको बोक्राले मोटोपना कम गर्नुको साथै कलेजो, स्तन र आन्द्राको क्यान्सरबाट बचाउँछ । अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ क्यान्सरको अध्ययनअनुसार दैनिक एउटा स्याउको सेवनले स्तन क्यान्सरको सम्भावनालाई २३ प्रतिशतसम्म रोक्न सकिन्छ ।
स्याउको बोक्रा र बियाँमा शरिरलाई चाहिने निकै आवश्यक तत्व रहेको हुन्छ । स्याउमा भिटामिन सी, भिटामिन इ र फाइबर हुन्छ ।
स्याउले मुटुरोगबाट बचाउँछ, पखलाको उपचार गर्छ, कब्जियतको समाधान लगायत अन्य दजनौ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्छ । दैनिक रुपमा एउटा स्याउ खाँदा डाक्टरकहाँ गइरहनु पर्दैन ।
यो भनाईले पनि शरिर स्वस्थ राख्न स्याउको महिमा पुष्टि हुन्छ । स्याउ बोक्रा नफाली खाने फल भएपनि कतिपयले फालेको पाइन्छ । किनकी यसमा क्यान्सरबिरोधी तत्व हुन्छ ।
स्याउमा पाइने फ्ल्याभोननोइन नाम गरेको एन्टिअक्सिडेन्टले मुटु पोल्नबाट बचाउँछ । स्याउमा क्युरसिटेन नाम गरेको एउटा तत्व हुन्छ जसले मुटु सुन्निने समस्याबाट पनि जोगाउँछ ।
क्युरसिटेन मुटुका धमनीमा रगत जम्ने समस्यालाई निको पारी ह्दयघातलगायत अन्य मुटुजन्य समस्याबाट जोगाउछ । स्याउको बोक्रा र बियाँले शरिरका कोष हानी हुनबाट पनि बचाउँछ ।
मस्तिष्क मानव शरीरको खप्परभित्र रहन्छ। खप्पर र मस्तिष्कको बीचमा तीन सतह रक्षात्मक “कवच”हरु हुन्छन जसलाई “मेनिञ्जेस” भनिन्छ। यी मेनिञ्जेसहरु बाहिर देखि भित्र सम्म क्रमशः ड्युरा, एराकनोइड र पायामातर हुन। मस्तिष्कले शरीरका अन्य अंगहरुलाई निर्देशन दिन र अन्य अंगहरुसंग समन्वय गर्न नसा र रसायनहरु (हर्मोन) प्रयोग गर्दछ।
मस्तिष्कबाट निस्कने नसाहरुलाई विभिन्न प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ। जस्तै, मस्तिष्कबाट सिधै निस्कने नसाहरुलाई क्रेनियल नसा भनिन्छ भने मस्तिष्कबाट ढाड हुंदै निस्कने नसाहरुलाई स्पाइनल नसा भनिन्छ। मस्तिष्कमा अंगहरुबाट जानकारी ल्याउने नसालाई एफरेन्ट र मस्तिष्कबाट अंगहरुमा जानकारी लग्ने नसाहरुलाई इफरेन्ट भनिन्छ।
१. मानिसको मस्तिष्कको तौल शरिरको जम्मा तौलको दुई प्रतिशत हुन्छ तर यसले बिस प्रतिशत शक्ति र अक्सिजन प्रयोग गर्छ ।
२. मानिसको मस्तिष्कमा ७३ प्रतिशत पानी रहेको हुन्छ । तपाइको ध्यान, सम्झिन सक्ने क्षमता र अन्य संज्ञानात्मक क्षमताहरूलाई असर गर्न २ प्रतिशत पानीको प्रयोग हुन्छ ।
३. अक्सिजन बिना ५ मिनेटमा मस्तिष्कको क्षति हुन सक्छ ।
४. शिशुहरूको ठुलो टाउकोले मस्तिष्कको छिटो व्रिद्धिलाइ रोक्छ । शिशुहरुको दुई वर्षको हुदाको मस्तिष्क भनेको वयस्क भएपछिको मस्तिष्कको ८० प्रतिशत हो ।
५. मानिसको मस्तिष्कले २०-२५ वाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । जुन कम वाटको एलईडि लाइटको लागि प्रसस्त हुन्छ ।
६. एउटा साधारण मस्तिष्कले एक दिनमा ५०,००० विचारहरू उत्पादन गर्न सक्छ । त्यस मध्य ७० प्रतिसत विचारहरु नकरात्मक हुन्छन ।
७. सामन्यतया , केटाहरुको तुलनामा केटिहरुको मस्तिष्क १० प्रतिसत सानो हुन्छ ।
८. मानव मस्तिष्कलाइ अहिलेको प्रबिधिहरु घडी, स्विचबोर्ड, कम्प्युटर, र इन्टरनेटसगँ तुलना गरिन्छ ।
९. मानव मस्तिष्कको भण्डारण क्षमता लगभग असीमित मानिन्छ । यो कम्प्युटरको RAM जस्तै प्रयोग गर्न मिल्छ ।
१०. मानव मस्तिष्क १० प्रतिसत मात्र प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो । मस्तिष्क स्क्यानले देखाउछ कि हामीले धेरै भन्दा धेरै मस्तिष्कको प्रयोग गर्छै ।
११. मानिसको टाउकोमा भएको मस्तिष्कमात्र मस्तिष्क होइन । मानिसको आन्द्रामा अर्को अर्को एउटा मस्तिष्क हुन्छ जसमा १,००,००० न्युरोन हुन्छन ।
१२. मानब मस्तिष्कमा एक सेकेण्डमा १00,000 भन्दा बढि रसायन प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्।
१४. अल्बर्ट आइस्टाइनको मस्तिष्कको तौल १२३० ग्राम थियो । जुन औसत भन्दा १० प्रतिसत कम हो । तर पनि न्युरोनहरुको मात्रा औसत भन्दा बढि थियो ।
१५. मानव मस्तिष्क प्रतेक दिन सानो हुदै गइरहेको छ । अबको १०-२०,००० वर्ष पछि साधारण मानिसको मस्तिष्क टेनिस बल जत्रै हुने छ ।
डा. वसन्त पन्तका अनुसार मस्तिष्कघात हुँदा ५० प्रतिशत मानिसको मृत्यु तुरून्तै हुन्छ भने ५० प्रतिशत अस्पताल आइपुग्छन् । अस्पताल आइपुगेकामध्ये ५० प्रतिशतलाई बचाउन सकिन्छ । ‘यो संख्या कूल बे्रन एट्याक हुने सख्याको २५ प्रतिशत हो,’ उनले भने, ‘बाँच्न सफल भएकाहरूको पनि ५० प्रतिशत कुनै भाग वा पाटो प्यारालाइसिस (पक्षघात) हुन्छ ।
बे्रन एट्याक क्यान्सर र मुटुरोगपछि मृत्युको तेस्रो ठूलो कारण हो ।’ उनका अनुसार गरीव देशमा बे्रन एट्याकको प्रमुख कारण अस्वथकर जीवनशैली नै हो । ब्लडप्रेसर भएका ३० देखि ३५ प्रतिशतलाई ब्रेन एट्याक हुनसक्छ ।
मस्तिष्कमा रक्त प्रवाहमा अवरोध भएपछि उत्पन्न हुने समस्या नै मस्तिष्कघात हो । मस्तिष्कका कोशिकाहरूमा रगतको माध्यमबाट अक्सिजन पुग्ने गर्छ । तिनै अक्सिजनका माध्यमले नै मस्तिष्कले काम गर्छ । तर, रक्त प्रवाहमा अवरोध हुँदा त्यो प्रक्रिया रोकिन्छ, दिमागका कोशिकाहरू मर्छन् र ब्रेन एट्याक हुन्छ ।
मस्तिष्कलाई रगत आपूर्ति गर्ने नशाहरु फुटेर वा थुनिएर रगत प्रवाह रोकिन पुग्छ । रगत प्रवाह रोकिनेबित्तिकै मस्तिष्कका कोशिकाहरुमा अक्सिजन प्रवाह हुन सक्दैन र मस्तिष्कका तन्तुहरु मर्न थाल्छ । समयमै उपचार गरिएन भने बिरामीको मृत्यु समेत हुने गर्छ ।
नशा फुटेर हुने एट्याकको प्रमुख कारण ब्लडप्रेसरको औषधिमा गरिने लापरबाही नै हो । यस्तो समस्या विशेषगरी युवामा देखिने गरेको पाइन्छ । डा. पन्तका अनुसार हृदयघातभन्दा ब्रेन एट्याक झन् बढी खतरनाक समस्या हो । हृदयघातको समयमै अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्न सकियो भने मानिस पुरानै अवस्थाको जीवन बाँच्न सक्छ तर बे्रन एट्याकमा शल्यक्रियापछि पनि पुरानै अवस्थामा फर्किन सकिन्न र केही न केही खोट भएको जीवन विताउनु पर्छ ।
ब्रेन एट्याकमा शरीरको निश्चित पाटो कमजोर रहने सम्भावना रहिरहन्छ । ब्रेन एट्याकले प्यारालाइसिसको सम्भावना समेत बढी हुन्छ । ब्रेन एट्याक भएकाहरुमा मुख बांगो हुने, हातगोडा नचल्ने, आँखा देख्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने जस्ता समस्या देखिन्छ ।
सामान्यतया मस्तिष्कघातले एकैपटक मानिसलाई आक्रमण गर्छ । तर, त्यो भन्दा पहिला मानिसलाई केही समय एउटा आँखा देख्न छाड्छ र केही समयपछि फेरि देख्न हुन्छ । त्यसैगरी केही समयका लागि एउटा पाटो नचल्ने हुन्छ र क्रमशः फेरि चल्न थाल्छ ।
केही समयसम्म यस्तो प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ भने त्यो बे्रन एट्याकको स्पष्ट पूर्व संकेत हो । यस्तै अचानक सहनै नसक्ने गरी छुट्टै तरिकाले टाउको दुख्नु, रिंगटा लाग्नु, शारीरिक सन्तुलन बिग्रिएर ढल्नु, शरीरको एक पाटोमा झमझम गर्नु, निदाउनु वा कमजोरी देखापर्नु, होस हराउनु, एकाएक दृष्टि धमिलो हुनु, बोली लटपटिनु वा बोल्न नसक्नु, वान्ता हुनु, बेहोस हुन, प्यारालाइसिस हुनु मस्तिष्कघातका लक्षण हुन् ।
नोट: माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
Don't Miss it नीम जति तितो छ यसको फाइदा पनि त्यति नै मिठो छ । नीमको प्रयोग कसरी गर्ने, कस्ता रोगहरु ठिक पार्छ, जान्नुहोस्
Up Next महिला वा पुरुष जो भए पनि कपाल झर्ने समस्या बाट चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब यति कुरा जान्नुहोस्
20 hours ago biplov
21 hours ago biplov
खानामा ‘अजिनोमोटो’को प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य सखाफ बनाउने रहेछ । यस्ता परिकारबाट टाडा बस्नुनै उचित: सबैले पढाै एकचाेटि
सामान्य खाजाघरदेखि ठूला रेस्टुरेन्टसम्म खानेकुराको स्वाद बढाउन भन्दै ‘अजिनोमोटो’ प्रयोग गरिन्छ । सेतो मसला भनिने ‘अजिनोमोटो’ वर्षमा ४ हजार मेट्रिक…